ချစ်သူနှစ်ဦးပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းစည်းနို်င်ရန်အတွက် စိတ်ထားကောင်း ၂ ခုသာလိုအပ် – Gentleman Magazine
ချစ်သူနှစ်ဦးပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းစည်းနို်င်ရန်အတွက် စိတ်ထားကောင်း ၂ ခုသာလိုအပ်
20/10/2015 01/11/2015 Admin
ရေရှည် အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အတွက် လိုအပ်သော အချက် ၂ ချက်က စာနာတက်သောစိတ်ထား နဲ့ အလုိုက်သိတက်တဲ့ စိတ်ထားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်တစ်နှစ် ဝါကျွတ်တာနဲ့ ဆောင်လိုက်ကြတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မနည်းပါဘူး။ ဆုတွေဝိုင်းတောင်းပေးတာကတော့ ထာဝရပျော်ရွှင်ပြီး အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူအများစုရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ကပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အဆုံးသတ်ရန် အခက်အခဲများစွာ ကြုံတွေ့ရမှာပါ။
ခုခေတ်ကြီးက အမြန်ခေတ်ကြီးဆိုတော့ အကုန်လုံးက မြန်နေကြပါတယ်။ အမြန်ကား၊ အမြန်ချောပို့၊ အမြန် ဖုန်း၊ အမြန် ကွန်ပြူတာ၊ အမြန် တွေ အများကြီးထဲမှာ အမြန်တွေ့ ၊အမြန်ချစ်၊အမြန် ယူ ပြီး အမြန်ကွဲသွားတာတွေ အများကြီးကြုံတွေ့ရမှာပါ။ မြန်မာယဉ်ကျေးမှု အရ အိမ်ထောင်ကွဲတယ်ဆိုတာ လူကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်နေတဲ့အတွက် လင်မယားတော်တော်များများဟာ စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲစွာ နောင်တများတပွေ့တပိုက်နဲ့ ယုိုယွင်းနေတဲ့ လက်ရှိအိမ်ထောင်မှာ သည်းညည်းခံနေရတာများပါတယ်။ အ်ိမ်ထောင်ရေးမသာယာရင် လင်ယော မယားပါ ပျော်ရွှင်မှုရှိ မှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် ကလေးပါ ရှိလာပြီးဆိုလျှင်လည်း ကလေးအတွက်များစွာ ထိခိုက်မှုရှိလာမှာပါ။ ဒါတွေကို အစတည်းက ကာကွယ်ဖို့အတွက် သာယာတဲ့ အိမ်ထောင် နဲ့ သာယာမှုကင်းမဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေ မှာရှိတက်တဲ့ အမူအကျင့် များကိုသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းဖို့ဆုိုတာက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်နားလည်မှု ရှိဖို့အလွန်ရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ် အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ သူ့အသိုင်းအဝို်င်း တူဖို့ခဲယဉ်းသလို သူ့အကြိုက် ကိုယ့် အကြိုက် ၊သူနေထို်င်တဲ့ပုံ . ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ပုံ ကအစ ကွဲလွဲမှုတွေများစွာရှိမှာပါ။ အတူတူ စနေကြတဲ့ အခါမှ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် ပြသာနာပေါင်းစုံလည်း ရှိလာမှာပါ။ သာယာမှုရှိခြင်း မရှိခြင်းက အဲဒီ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပြသာနာတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလဲဆိုတာ အပေါ်မှာ များစွာမူတည်နေပါတယ်။
သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အမှားတွေ. အဆင်မပြေတာတွေ တွေ့လာရပြီဆိုရင် နားလည်မှုနဲ့ နှစ်ဦးသား အတူတူဖြေရှင်းတက်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ နှစ်ဦးကြား ယုံကြည်မှုတိုးလာပြီး ဘာမဆိုအတူတူရင်ဆိုင်ဖို့ ခွန်အားတွေရှိလာပါတယ်။ တချိ်န်တည်းမှာပဲ ကောင်းတဲ့ အချက်များ ကို မြင်၍ အသိအမှတ်ပြု ချီးမွန်းတက်ကြပါသေးတယ်။
သာယာမှုကင်းတဲ့ အိမ်ထောင်မှာဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ကိုတစ် ယောက်အပြစ်တင်ပြီး ဖြေရှင်းတက်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့လာပြီး တစ်ယောက်အမှား တစ်ယောက်ထောက်ပြလာကာ ပြသာနာများ ကိုဖိတ်ခေါ်နေတက်ပါတယ်။ ပြောလိုက်တဲ့စကားကို အတိအကျလိုက်ကောက်တာ၊ အရွဲ့တိုက်တာတွေ က သာယာမှုတွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများတဲ့က အချို့သာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ပြောစကားကို တစ်ယောက်အလေးထားမှုဟာလည်း သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ခန့်မှန်းပေနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားက ဘောလုံးစိတ်ဝင်စားသူဆိုပါစို့။ ယောက်ျားကဘောလုံးပွဲ ကြည့်နေချိန် မှာ ဘောလုံး ဖရီးကစ်ကနေ ဂိုးရသွားတဲ့ ဟာကို တော်တော်သဘောကျပြီး မိန်းမကိုခေါ်ပြလိုက်တယ်ပဲထား။ ဒီအချိန်မှာ မိန်းမအနေနဲ့ လုပ်လို့ရတာက
လာကြည့်ပြီး ယောက်ျားပြောတာကို ထောက်ခံတာ
ဟုတ်လားဟု ပြောကာ လာမကြည့်တာ
ဘယ်အပြုအမူ ကသာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုဖန်တီးပေးမယ်ထင်သလဲ။ ယောက်ျားအနေနဲ့ မိန်းမကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ကြည့်ခိုင်းပြီ ဆိုကတည်းက ယောက်ျားကိုယ်တိုင် အရေးပါတယ်ထင်လို့ဖြစ်တဲ့ အတွက် လာမကြည့်မိတဲ့မိန်းမများက ယောက်ျားရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို အရေးမပေးတာ . ဂရုမစိုက်တဲ့ပုံပေါက်သွားပါတယ်။ ဒီတော့ ယောက်ျားအနေနဲ့ ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးမထားသည့် သူနှင့်နေရသည့် အတွက် ပျော်ရွှင်မှုများနှင့်ဝေးကွာလာမည်။ ဒါက ဥပမာ တစ်ခုတည်းပါ။ တကယ်တမ်း လက်တွေ့ဘဝမှာ ဒါမျိုးတွေက ခဏခဏ ကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ယောက် ထင်မြင်ချက်ကို တစ်ယောက် မလေးစားသော အထင်မကြီးသော အိမ်ထောင်ရေးကသာယာမည်မဟုတ်ပါ။ အလိုက်သတိနဲ့ နေတက်ထိုင်တက်ကာ မှ အိမ်ထောင်ရေးက သာယာမည်ဖြစ်သည်။
စာနာတက်တဲ့စိတ်ကတော့ အိမ်ထောင်များကို ပူးကပ်ပေးထားတဲ့ ကော်လိုပါပဲ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ စာနာမှုက မီးနဲ့အသွင်တူပါတယ်။ ကိုယ်ကစပေးလိုက်တာ နဲ့ ကိုယ့်စီကနေလျှော့သွားခြင်းမရှိပဲသူများ တွေဆီမှာပါတိုးပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာနာတက်လေလေ ကိုယ်ကို သူက စာနာလေလေဖြစ်မှာပါ။ စာနာမှု ဆိုတာက ကြွက်သားလိုပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လေလေ ကြီးထွားသန်မာလေလေပါ။ စာနာမှုကို အမြဲ ကျင့်သုံးနေမှ အိမ်ထောင်ေ၇းသာယာနိုင်မှာပါ။
ကိုယ့်ကြင်သူက ကိုယ့်ကို လိုအပ်နေတဲ့ အချန်ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်း သူ့အနားသွားပြီး သူပြောတာနာထောင်ပေးတာစာနာမှုတစ်ခုပါ။ ကိုယ်ပင်ပန်းနေဆိုပြီး လှစ်လျှူရှု့ ပြီး ဖုန်းကစားတာဖြစ်ဖြစ် TV ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီလိုသေးသေး လေးတွေကနေ အကြီးကြီးဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ပေါက်ကွဲသွားတက်လို့ပါ။ လှစ်လျှူရှု့မှုများက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တစ်ဖြေးဖြေး နီးရက်နဲ့ဝေးသွားစေပြီး လှစ်လျှူရှု့ခံရတဲ့လူအပေါ်မှာ စိတ်သောကရောက်ရပါတယ်။
စာနာစိတ်ထားရန်အခက်ခဲဆုံးအချိန်က ရန်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်ကပဲ စာနာစိတ်အထားရဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ပြောချင်တာပြော. လုပ်ချင်တာလုပ် အော်ဟစ် ဆဲဆိုနေလို့ကတော့ အဆုံးသပ်ရလဒ်က ကောင်းသောရလဒ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင် ချစ်ကြည်ရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ စာနာစိတ်ထားရမယ်ဆိုတာ စိတ်မဆိုး ရဘူး စိတ်မကောက်ရဘူး မဟုတ်ပါဘူး. ဒါပေမယ့် ဘယ်လို စိတ်ဆိုးနေတာကို ပြလဲဆိုတာပါ။ တဖက်လူကို အော်ဟစ်ပြီး သူအမှားကိုထောက်ပြလို့ရသလို သူ့လုပ်ရပ်ကြောင့်သင့် ဘယ်လိုခံစားရသလဲ ဘယ်လောက်စိတ်ဆိုးလဲဆိုတာကို ပြောပြလဲရပါတယ်။
“နင်ဘာလို့နောက်ကျရတာလဲ . အမြဲနောက်ကျနေတာပဲ . ဘာမှကို အားကိုးလို့မရဘူး” လို့အပြစ်ပြောမယ့်အစား “နင်ကိုမပြောလဲပြောပြချင်ဘူး ဒါပေမယ့် နင်နောက်ကျကျနေတာ ငါစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်” လုို့ပြောတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ သူ့အပြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရမယ့်အစား သူကိုယ်ချင်းစာတက်အောင် ခပ်ပျော့ပျော့လေး ပြောလိုက်တော့ ရန်ထမဖြစ်ရတော့ပါဘူး။ သူနောက်ကျနေတာက လဲသင့်အတွက် လက်ဆောင်တစ်ခုခုဝင်ဝယ်ပေးနေလို့ (သင့်အတွက်ကြောင့်) ဆိုရင် အပြစ်တင်မိတဲ့ သင့်ကို သူစိတ်ခုသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အပြစ်တင်မစောရုံသာမက အပြစ်တင်ခြင်းကို စာနာစိတ်ထားကာ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
စာနာစိတ်နောက်တစ်မျိုးက ပျော်ရွှင်မှုမျှဝေတာပဲခံစားတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကအလုပ်ရာထူးတိုးတာကိုပြောပြတဲ့အခါ သူမရဲ့တုန့်ပြန်မှုများက
ဝမ်းသာအားရနဲ့ ဘာရာထူးလဲ ဘယ်တော့စမှလဲ. (စိတ်ပါသော အပြုသဘော)
ကောင်းတာပေါ့ သူမနဲ့မဆိုင်သလို ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြေတာ (စိတ်မပါသော အပြုသဘော)
ဂရုမစိုက်ပဲ သူမ ဘောနပ်ရတာကို ပြန်ပြောပြတာ (စိတ်မပါတသာ အပျက်သဘော)
အလုပ်တွေကော နိုင်ပါ့မလား။ ခုတောင်တော်တော်အလုပ်များနေတာ။ လခလဲပိုရတာမဟုတ်ဘူး။ (စိတ်ပါသော အပျက်သဘော)
စိတ်ပါသော အပြုသဘောဆောင်သော တုန့်ပြန်မှုများဟာ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ဦးတည်နေပါတယ်။ အ်ိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ငွေ ပြသာနာ၊ ကလေးတွေ ကိစ္စ၊ မိဘတွေကိစ္စ များကို ကြုံတွေ့လာရမှာဖြစ်ပြီး အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာ လင်မယား အချင်းချင်းအပေါ်မှာထားတဲ့ စိတ်ထားပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်အိမ်ထောင်ကသာယာမယ် မသာယာဘူး အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာပါ။
အိမ်ထောင်ပြုပြီး ၁ နှစ် ၂ နှစ် အတွင်းမှာ စိတ်ကျေနပ် သာယာမှုတွေ က အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပျောက်သွားတက်ကြပါတယ်။ စာနာစိတ်နဲ့ အလုိုက်သိတက်တဲ့ စိတ်တွေကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ အတွဲတွေကတော့ သာယာတဲ့ အနာဂတ်များဆီကို နှစ်ကိုယ်တူလက်တွဲ လောကကြီးကို ရဲရဲ ရင်ဆိုင်သွားနိုင်မှာပါ။
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
ခဈြသူနှဈဦးပြျောရှငျစှာ ပေါငျးစညျးနျိုငျရနျအတှကျ ဤ စိတျထားကောငျး ၂ ခုသာလိုအပျ
ရရှေညျ အောငျမွငျတဲ့ အိမျထောငျရေး အတှကျ လိုအပျသော အခကျြ ၂ ခကျြက စာနာတကျသောစိတျထား နဲ့ အလုိုကျသိတကျတဲ့ စိတျထားတို့ပဲဖွဈပါတယျ။
တဈနှဈတဈနှဈ ဝါကြှတျတာနဲ့ ဆောငျလိုကျကွတဲ့ မင်ျဂလာဆောငျတှေ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့မနညျးပါဘူး။ ဆုတှဝေိုငျးတောငျးပေးတာကတော့ ထာဝရပြျောရှငျပွီး အိုအောငျမငျးအောငျပေါငျးရပါစပေေါ့။ ဒါပမေယျ့ လူအမြားစုရဲ့ အိမျထောငျသညျဘဝ ကပြျောရှငျမှုနဲ့ အဆုံးသတျရနျ အခကျအခဲမြားစှာ ကွုံတှရေ့မှာပါ။
ခုခတျေကွီးက အမွနျခတျေကွီးဆိုတော့ အကုနျလုံးက မွနျနကွေပါတယျ။ အမွနျကား၊ အမွနျခြောပို့၊ အမွနျ ဖုနျး၊ အမွနျ ကှနျပွူတာ၊ အမွနျ တှေ အမြားကွီးထဲမှာ အမွနျတှေ့ ၊အမွနျခဈြ၊အမွနျ ယူ ပွီး အမွနျကှဲသှားတာတှေ အမြားကွီးကွုံတှရေ့မှာပါ။ မွနျမာယဉျကြေးမှု အရ အိမျထောငျကှဲတယျဆိုတာ လူကဲ့ရဲ့စရာဖွဈနတေဲ့အတှကျ လငျမယားတျောတျောမြားမြားဟာ စိတျဆငျးရဲ ကိုယျဆငျးရဲစှာ နောငျတမြားတပှတေ့ပိုကျနဲ့ ယုိုယှငျးနတေဲ့ လကျရှိအိမျထောငျမှာ သညျးညညျးခံနရေတာမြားပါတယျ။ အျိမျထောငျရေးမသာယာရငျ လငျယော မယားပါ ပြျောရှငျမှုရှိ မှာ မဟုတျတဲ့အပွငျ ကလေးပါ ရှိလာပွီးဆိုလြှငျလညျး ကလေးအတှကျမြားစှာ ထိခိုကျမှုရှိလာမှာပါ။ ဒါတှကေို အစတညျးက ကာကှယျဖို့အတှကျ သာယာတဲ့ အိမျထောငျ နဲ့ သာယာမှုကငျးမဲ့တဲ့ အိမျထောငျသညျတှေ မှာရှိတကျတဲ့ အမူအကငျြ့ မြားကိုသိထားရမှာဖွဈပါတယျ။
လူနှဈယောကျပေါငျးစညျးဖို့ဆုိုတာက တဈယောကျကို တဈယောကျနားလညျမှု ရှိဖို့အလှနျရေးကွီးပါတယျ။ ကိုယျ အသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ သူ့အသိုငျးအဝျိုငျး တူဖို့ခဲယဉျးသလို သူ့အကွိုကျ ကိုယျ့ အကွိုကျ ၊သူနထျေိုငျတဲ့ပုံ . ကိုယျနထေိုငျတဲ့ပုံ ကအစ ကှဲလှဲမှုတှမြေားစှာရှိမှာပါ။ အတူတူ စနကွေတဲ့ အခါမှ ပျေါပေါကျလာမယျ့ ပွသာနာပေါငျးစုံလညျး ရှိလာမှာပါ။ သာယာမှုရှိခွငျး မရှိခွငျးက အဲဒီ ပျေါပေါကျလာတဲ့ ပွသာနာတှကေို ဘယျလိုနညျးနဲ့ ဖွရှေငျးလဲဆိုတာ အပျေါမှာ မြားစှာမူတညျနပေါတယျ။
သာယာပြျောရှငျတဲ့ အိမျထောငျတဈခုမှာ အမှားတှေ. အဆငျမပွတောတှေ တှလေ့ာရပွီဆိုရငျ နားလညျမှုနဲ့ နှဈဦးသား အတူတူဖွရှေငျးတကျကွပါတယျ။ ဒီတော့ နှဈဦးကွား ယုံကွညျမှုတိုးလာပွီး ဘာမဆိုအတူတူရငျဆိုငျဖို့ ခှနျအားတှရှေိလာပါတယျ။ တချြိနျတညျးမှာပဲ ကောငျးတဲ့ အခကျြမြား ကို မွငျ၍ အသိအမှတျပွု ခြီးမှနျးတကျကွပါသေးတယျ။
သာယာမှုကငျးတဲ့ အိမျထောငျမှာဆိုရငျတော့ တဈယောကျကိုတဈ ယောကျအပွဈတငျပွီး ဖွရှေငျးတကျကွပါတယျ။ ဒီတော့ တဈယောကျပျေါတဈယောကျယုံကွညျမှု ကငျးမဲ့လာပွီး တဈယောကျအမှား တဈယောကျထောကျပွလာကာ ပွသာနာမြား ကိုဖိတျချေါနတေကျပါတယျ။ ပွောလိုကျတဲ့စကားကို အတိအကလြိုကျကောကျတာ၊ အရှဲ့တိုကျတာတှေ က သာယာမှုတှကေို ပကျြစီးစတေဲ့ အကွောငျးအရငျးမြားတဲ့က အခြို့သာဖွဈပါတယျ။
တဈယောကျပွောစကားကို တဈယောကျအလေးထားမှုဟာလညျး သာယာတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ခနျ့မှနျးပနေိုငျတဲ့ အခကျြတဈခကျြဖွဈပါတယျ။ ယောကျြားက ဘောလုံးစိတျဝငျစားသူဆိုပါစို့။ ယောကျြားကဘောလုံးပှဲ ကွညျ့နခြေိနျ မှာ ဘောလုံး ဖရီးကဈကနေ ဂိုးရသှားတဲ့ ဟာကို တျောတျောသဘောကပြွီး မိနျးမကိုချေါပွလိုကျတယျပဲထား။ ဒီအခြိနျမှာ မိနျးမအနနေဲ့ လုပျလို့ရတာက
– လာကွညျ့ပွီး ယောကျြားပွောတာကို ထောကျခံတာ
– ဟုတျလားဟု ပွောကာ လာမကွညျ့တာ
– အလုပျရှပျတယျဟု ပွနျအျောတာ
ဘယျအပွုအမူ ကသာယာတဲ့ အိမျထောငျရေးကိုဖနျတီးပေးမယျထငျသလဲ။ ယောကျြားအနနေဲ့ မိနျးမကို ဖိတျချေါပွီး ကွညျ့ခိုငျးပွီ ဆိုကတညျးက ယောကျြားကိုယျတိုငျ အရေးပါတယျထငျလို့ဖွဈတဲ့ အတှကျ လာမကွညျ့မိတဲ့မိနျးမမြားက ယောကျြားရဲ့ ထငျမွငျခကျြကို အရေးမပေးတာ . ဂရုမစိုကျတဲ့ပုံပေါကျသှားပါတယျ။ ဒီတော့ ယောကျြားအနနေဲ့ ကိုယျ့ကို တနျဖိုးမထားသညျ့ သူနှငျ့နရေသညျ့ အတှကျ ပြျောရှငျမှုမြားနှငျ့ဝေးကှာလာမညျ။ ဒါက ဥပမာ တဈခုတညျးပါ။ တကယျတမျး လကျတှဘေ့ဝမှာ ဒါမြိုးတှကေ ခဏခဏ ကွုံတှနေ့ရေမှာဖွဈပွီး တဈယောကျ ထငျမွငျခကျြကို တဈယောကျ မလေးစားသော အထငျမကွီးသော အိမျထောငျရေးကသာယာမညျမဟုတျပါ။ အလိုကျသတိနဲ့ နတေကျထိုငျတကျကာ မှ အိမျထောငျရေးက သာယာမညျဖွဈသညျ။
စာနာတကျတဲ့စိတျကတော့ အိမျထောငျမြားကို ပူးကပျပေးထားတဲ့ ကျောလိုပါပဲ မရှိမဖွဈလိုအပျပါတယျ။ စာနာမှုက မီးနဲ့အသှငျတူပါတယျ။ ကိုယျကစပေးလိုကျတာ နဲ့ ကိုယျ့စီကနလြှေော့သှားခွငျးမရှိပဲသူမြား တှဆေီမှာပါတိုးပှားလာမှာဖွဈပါတယျ။ စာနာတကျလလေေ ကိုယျကို သူက စာနာလလေဖွေဈမှာပါ။ စာနာမှု ဆိုတာက ကွှကျသားလိုပါပဲ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလလေေ ကွီးထှားသနျမာလလေပေါ။ စာနာမှုကို အမွဲ ကငျြ့သုံးနမှေ အိမျထောငျရေးသာယာနိုငျမှာပါ။
ကိုယျ့ကွငျသူက ကိုယျ့ကို လိုအပျနတေဲ့ အခနျြဘယျလောကျပငျပနျးပငျပနျး သူ့အနားသှားပွီး သူပွောတာနာထောငျပေးတာစာနာမှုတဈခုပါ။ ကိုယျပငျပနျးနဆေိုပွီး လှဈလြှူရှု့ ပွီး ဖုနျးကစားတာဖွဈဖွဈ TV ကွညျ့တာဖွဈဖွဈလုပျလို့ရပါတယျ။ ဒီလိုသေးသေး လေးတှကေနေ အကွီးကွီးဖွဈပွီး တဈနပေ့ေါကျကှဲသှားတကျလို့ပါ။ လှဈလြှူရှု့မှုမြားက တဈယောကျနဲ့တဈယောကျတဈဖွေးဖွေး နီးရကျနဲ့ဝေးသှားစပွေီး လှဈလြှူရှု့ခံရတဲ့လူအပျေါမှာ စိတျသောကရောကျရပါတယျ။
စာနာစိတျထားရနျအခကျခဲဆုံးအခြိနျက ရနျဖွဈနတေဲ့ အခြိနျဖွဈပွီး အဲဒီအခြိနျကပဲ စာနာစိတျအထားရဆုံးဖွဈမှာပါ။ ပွောခငျြတာပွော. လုပျခငျြတာလုပျ အျောဟဈ ဆဲဆိုနလေို့ကတော့ အဆုံးသပျရလဒျက ကောငျးသောရလဒျဖွဈမှာမဟုတျတဲ့အပွငျ ခဈြကွညျရေးကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ စာနာစိတျထားရမယျဆိုတာ စိတျမဆိုး ရဘူး စိတျမကောကျရဘူး မဟုတျပါဘူး. ဒါပမေယျ့ ဘယျလို စိတျဆိုးနတောကို ပွလဲဆိုတာပါ။ တဖကျလူကို အျောဟဈပွီး သူအမှားကိုထောကျပွလို့ရသလို သူ့လုပျရပျကွောငျ့သငျ့ ဘယျလိုခံစားရသလဲ ဘယျလောကျစိတျဆိုးလဲဆိုတာကို ပွောပွလဲရပါတယျ။
“နငျဘာလို့နောကျကရြတာလဲ . အမွဲနောကျကနြတောပဲ . ဘာမှကို အားကိုးလို့မရဘူး” လို့အပွဈပွောမယျ့အစား “နငျကိုမပွောလဲပွောပွခငျြဘူး ဒါပမေယျ့ နငျနောကျကကြနြတော ငါစိတျအနှောကျအယှကျဖွဈတယျ” လုို့ပွောတော့ ပိုကောငျးတာပေါ့။ သူ့အပွဈကို ဖုံးကှယျရမယျ့အစား သူကိုယျခငျြးစာတကျအောငျ ခပျပြော့ပြော့လေး ပွောလိုကျတော့ ရနျထမဖွဈရတော့ပါဘူး။ သူနောကျကနြတောက လဲသငျ့အတှကျ လကျဆောငျတဈခုခုဝငျဝယျပေးနလေို့ (သငျ့အတှကျကွောငျ့) ဆိုရငျ အပွဈတငျမိတဲ့ သငျ့ကို သူစိတျခုသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒီတော့ အပွဈတငျမစောရုံသာမက အပွဈတငျခွငျးကို စာနာစိတျထားကာ ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။
စာနာစိတျနောကျတဈမြိုးက ပြျောရှငျမှုမြှဝတောပဲခံစားတာဖွဈပါတယျ။ သငျကအလုပျရာထူးတိုးတာကိုပွောပွတဲ့အခါ သူမရဲ့တုနျ့ပွနျမှုမြားက
– ဝမျးသာအားရနဲ့ ဘာရာထူးလဲ ဘယျတော့စမှလဲ. (စိတျပါသော အပွုသဘော)
– ကောငျးတာပေါ့ သူမနဲ့မဆိုငျသလို ပေါ့ပကျြပကျြဖွတော (စိတျမပါသော အပွုသဘော)
– ဂရုမစိုကျပဲ သူမ ဘောနပျရတာကို ပွနျပွောပွတာ (စိတျမပါတသာ အပကျြသဘော)
– အလုပျတှကေော နိုငျပါ့မလား။ ခုတောငျတျောတျောအလုပျမြားနတော။ လခလဲပိုရတာမဟုတျဘူး။ (စိတျပါသော အပကျြသဘော)
စိတျပါသော အပွုသဘောဆောငျသော တုနျ့ပွနျမှုမြားဟာ သာယာပြျောရှငျတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ဦးတညျနပေါတယျ။ အျိမျထောငျတဈခုမှာ ကွာလာတာနဲ့အမြှ ငှေ ပွသာနာ၊ ကလေးတှေ ကိစ်စ၊ မိဘတှကေိစ်စ မြားကို ကွုံတှလေ့ာရမှာဖွဈပွီး အခကျအခဲတှကွေားထဲမှာ လငျမယား အခငျြးခငျြးအပျေါမှာထားတဲ့ စိတျထားပျေါမူတညျပွီး ဘယျအိမျထောငျကသာယာမယျ မသာယာဘူး အဆုံးအဖွတျပေးသှားမှာပါ။
အိမျထောငျပွုပွီး ၁ နှဈ ၂ နှဈ အတှငျးမှာ စိတျကနြေပျ သာယာမှုတှေ က အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ပြောကျသှားတကျကွပါတယျ။ စာနာစိတျနဲ့ အလုိုကျသိတကျတဲ့ စိတျတှကေို လကျကိုငျထားတဲ့ အတှဲတှကေတော့ သာယာတဲ့ အနာဂတျမြားဆီကို နှဈကိုယျတူလကျတှဲ လောကကွီးကို ရဲရဲ ရငျဆိုငျသှားနိုငျမှာပါ။
မိနျးကလေးတိုငျး တောငျ့တပွီး ယောကျြားလေးတိုငျး အားကစြဖေို့
Previous: ချက်ချင်း လက်ငင်း လူချစ် လူခင် ပေါအောင်နေထိုင်နည်း ၁၃ နည်း
Next: ချိန်းတွေ့ရင် ဘာတွေပြောရမလဲ ?